သဒ္ဓါလှိုင်း: April 2011
ညီမျှမှု ကင်းမဲ့ချင်တဲ့ စိတ်...
ငွေမှုန်ကြဲချင်တဲ့ စိတ်... တွေနဲ့
ကြဲချင်တိုင်း ကြဲနေတဲ့ စိတ်တွေနဲ့...
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 9:13 AM9comments:
အများကြီး မြင့်တယ် ...
အဲဒီလှိုင်းက သဒ္ဓါလှိုင်းပါ ...
စာတွေ သယ်ဆောင်လာတဲ့လှိုင်း ...။
ဆက်ပြီး ရိုက်ခတ်နေနိုင်ပါစေ ....။ ။
သဒ္ဓါ့ရဲ့ ဘလော့တနှစ်ပြည့် အမှတ်တရလေး ရေးပေးပါလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ မအားလပ်တဲ့ကြားထဲကနေ ချက်ချင်း ရေးပေးတဲ့ ကိုနွေဆူးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေ.။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 4:37 PM 11 comments:
ငါ… ကိုယ်တိုင် သောက်သုံးနေတဲ့
ငါ့.. ကိုယ်ငါ ဒဏ်ခတ်တယ်…!
ငါ့… ကိုယ်ငါ ပြစ်ဒဏ်ချလိုက်တယ်…!
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 11:12 PM 12 comments:
မြစ်တမြစ်ဟာ သူ့နှလုံးသားနဲ့ သူစီးရတာ ..
အဲဒီမြစ်ဟာ သမီးဖြစ်စေ ....။
ကျမအတွက် ကဗျာလေးတပုဒ်ကို ဘဝတခုလုံးအတွက် ကိုယ်စားပြု ခံစားသက်ဝင်နိုင်ပြီး နူးညံ့ညင်သာစွာနဲ့ တန်ဖိုးရှိရှိ စီးမျောသွားနိုင်အောင် ရင်နဲ့ရင်းပြီးရေးပေးခဲ့တဲ့ ကဗျာအရေးကောင်းပြီး ဘဝရဲ့ဝေဒနာတွေ.. ဘဝရဲ့ နာကျင်မှုတွေ... ဘဝမှာ အကောင်းဆုံး ဆက်လက် ရှင်သန်လိုစိတ်တွေ... ဘဝရဲ့ အတ္တတွေ.... ကို ကဗျာအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလို့ ထုဆစ်ရှင်သန်နေတဲ့ အကိုလို လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ ကမာပုလဲ ကို ဘလော့ပေါ်ကနေ ကျေးဇူးတင်တာထက် ပိုတယ်ဆိုတာ ပြောပါရစေ.။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 3:07 PM6comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 9:28 AM 13 comments: